Ukulinganisa kanye nokulamula - Izakhiwo ezithengiswayo ze-NJ & NY, i-probate, Defence Defence ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Icala & Arbitration
Ukulamula kungaba ngokuzithandela noma okuphoqelekile. Kodwa-ke, ukulamula okuphoqelekile kungavela kuphela esivumelwaneni noma inkontileka efakwa kuzo ngokuzithandela, lapho amaqembu avumelana khona ukubamba zonke izingxabano ezikhona noma ezizayo esikhathini sokulamula, ngaphandle kokwazi, ngokuqondile, ukuthi zingaba yini lezo zingxabano zesikhathi esizayo. Ukulamula kungabopha noma kungabophisi. Ukulamula okungabophisi kuyafana nokulamula ngoba isinqumo asikwazi ukubekelwa izinhlangothi. Kodwa-ke, umehluko omkhulu ngukuthi lapho umlamuleli ezozama ukusiza izinhlangano ukuthi zithole indawo ephakathi lapho zingayekethisa khona, umlamuli (ongewona obophayo) uhlala esuswe ngokuphelele kwinqubo yokuxazululwa futhi uzonikeza kuphela ukunquma kwesikweletu futhi, uma kufanelekile, inkomba yenani lomonakalo okhokhwayo. Ngencazelo eyodwa ukulamula kuyabopha futhi ukulamula okungabophisi ngakho-ke ubuchwepheshe akuyona ukulamula.
Isahluko 13 Ukuqothuka